ဗေဒင်ကဏ္ဍ Archives - MM Live News
အိမ်​သား အချင်းချင်း မသင့်​မြတ်​တာ /​ငွေဝင်​သမျှအ​ကြောင်းရှာပြီးကုန်​ကျ​နေတာ /အိမ်​သား​တွေ ကျန်းမာ​ရေးမ​ကောင်းတာ အတွက် အစီအရင်​ ….
အချိူ့​သောအိမ်​​တွေဟာ အိမ်​သား အချင်းချင်း မသင့်​မြတ်​တာ /​ငွေဝင်​သမျှအ​ကြောင်းရှာပြီးကုန်​ကျ​နေတာ /အိမ်​သား​တွေ ကျန်းမာ​ရေးမ​ကောင်းတာ စသည်​ဖြင့်​ …. တစ်​မျိူးပြီးတစ်​မျိူးဖြစ်​ပြီး အိမ်​ပူ၍ စီးပွားမတက်​ဖြစ်​​နေတတ်​ပါတယ်​။​အောက်​​ဖော်​ပြပါ အစီအရင်​ များကို ပြုလုပ်​ပါ။ …နံနက်​၆နာရီတွင်​ဖြစ်​​စေ ည​နေ ၆နာရီတွင်​ ဖြစ်​​စေ လှူဒါန်းပါ။ …အ​မွှေးတိုင်​ ၃တိုင်​နှင့်​ ဖ​ယောင်းတိုင်​ ၁တိုင်​ကို အိမ်​​ရှေ့တံခါးဝတွင်​ဖြစ်​​စေ အိမ်​​ရှေ့ဝရံတာတွင်​ဖြစ်​​စေ ခုံအမြင့်​​လေးတစ်​လုံးနှင့်​ ထွန်းညှိပါ။ …အိမ်​​စောင့်​နတ်​ ခြံ​စောင့်​နတ်​ မြို့​စောင့်​နတ်​များနှင့်​ အိမ်​ခြံ အတွင်းမှီတင်း​စောင့်​​ရှောက်​​နေထိုင်​ကြ​သော မြင်​အပ်​ မမြင်​အပ်​ သတ္တဝါများ ဘုရားမီးပူ​ဇော်​ရန်​ အလင်းတိုင်​ အ​မွှေးတိုင်​များ လှူဒါန်းပါသည်​။ ဤ အိမ်​ ဤခြံတွင်​​နေထိုင်​သူများအားလည်း​စောင့်​​ရှောက်​ပါ ။ စီးပွားတိုးတက်​ရန်​ ကူညီပါ စသည်​ဖြင့်​ ​ပြောဆိုနိုင်​ပါသည်​။ …နံနက်​မိုးလင်းသည်​နှင့်​ ပရိတ်​တရား​တော်​များ အိမ်​တွင်​ဖွင့်​ပါ။ …အိမ်​ဘုရားကို ဆွမ်း ​ရေချမ်း ​သောက်​​တော်​​ရေ. […]
၇ရက်သားသမီးများအတွက် 25.4.2019 မှ01.5.2019 အထိ တစ်ပတ်စာကံကြမ္မာဟောစာတမ်း…..
25.4.2019 မှ01.5.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ….. ဒီကာလအတွင်း လုပ်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ အိမ်နဲ့ မိသားစုနဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်တွေရော၊ လုပ် ငန်းခွင်အလုပ်တွေရော အနားယူချိန်နည်းပါးနေတတ်ပါတယ်။ အလုပ်များတော့ အခြားအရေးမပါတာတွေခဏ မေ့ထားပြီး ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒီကာလမှာ ကြိုးစားထားသမျှတွေက မိမိကိုယုံကြည်မှုတိုးစေပါတယ်။ ၀န်ထမ်းဆို အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမယ်ဆိုရင်တော့ အထက်လူကြီးဆီapprove ယူပြီးမှလုပ်စေချင်ပါတယ်။ အိမ် ပြောင်းချင်သူများဒီကာလမှာပြောင်းရရွှေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ ဒီနေ့မှာအထူးအားနည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အပူဒဏ်မခံနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီနေ့မှာခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ ပက်သက်သောရောဂါတွေကိုသတိထားလိုက်ပါ။အထက်လူကြီးများက လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မိမိတို့ကိုလွှဲ ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အလုပ်မှာတာဝန်ယူမှုတွေများနေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကတော့ စီးပွားရေးတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ချစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လဲ အထူးစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကတော့အကောင်းများတယ်။ ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ အကျိုးပေးဂဏန်း1/6/0…..အထူးဟော တာဝန်ယူရတာတွေများနေမည်။…ယတြာ …..သပြေပန်းဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။ တနင်္လာ ဒီကာလအတွင်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးကြည်လင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလိုကာလမျိုးဟာအရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆရာသမားတွေဆီက အကြံ ဥာဏ်တောင်းခြင်းများအထူးကောင်းပါတယ်။ […]
April 18, 2019 MM Live News
သောကြာသားသမီးများအတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ သောကြာသားသမီးများအတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း ဘ၀တစ်ဆင့်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်သွားအံ့။စီးပွားတက်အံ့။ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျောဇောထင်ရှားအံ့။အကောင်းပြော ချီးမွမ်းခံရလတ္တံ့။တရားထူးအသိထူးရအံ့။ရာထူးတိုးလစာတိုးခြင်း၊အလုပ်နေရာကောင်းရရှိခြင်းများကြုံလတ္တံ့။ကံတရာ သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးတို့၏ မျက်နှာသာပေးခြင်း ခံရလတ္တံ့။စိတ်ထဲမှာ ဖြတ်ခနဲပေါ်လာလျှင် ဆတ်ခနဲ ထလုပ်ပါ။ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာမည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း ၊ အခြေအနေကောင်း ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်း ၊ အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်း ၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများရလတ္တံ့။ ကောင်းသောအကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်လတ္တံ့။ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာများ ရွေးချယ်ရခက်သော အခြေအနေများကြုံရလတ္တံ့။ လူကြီးတစ်ယောက်၏အကူအညီ ကြီးကြီးမားမားရအံ့။ မိတ်ဆွေရင်း ဆရာရင်းများထံမှလည်း အကူအညီကောင်းများရအံ့။ ငွေရေးကြေးရေး – ငွေကြေးကံ အင်မတန်ကောင်းနေအံ့ ။ ရေစီးသလိုငွေဝင်နေအံ့ ။ နေရာမျိုးစုံက ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် […]
၇ရက်သားသမီးများအတွက် 18.4.2019 မှ 24.4.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း….
April 18, 2019 MM Live
18.4.2019 မှ 24.4.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း အကြံပေးချင်တာစီးပွားရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးအားစိုက်စေချင်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး နည်းလမ်းသစ်၊စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့ကြိုးစားလိုက်ပါ။ လူမှုရေးကိစ္စများ၊ တပည့်လက်သားတွေရဲ့သာရေးနာရေးကိစ္စ များရှိလဲ တတ်နိုင်သလောက်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါ။ မိသားစုတွေ စုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါက အနာဂတ်အတွက်လုပ် သင့်တာတွေကိုတိုင်ပင်လုပ်ကိုင်တာပိုကောင်းပါတယ်။မိသားစုစီးပွားရေးတွေဆိုဘယ်လိုတိုးချဲ့မလဲစသည်ဖြင့် စဉ်း စားသင့်တဲ့ကာလပါပဲ။ စီးပွားရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ မိမိလုပ်ချင်တာတွေကို အချိန်ယူပြီးလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ကိစ္စများ အမွေကိစ္စများ ဒီကာလမှာဆောင်ရွက်လို့သင့်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စီစဉ်ထားသူများ ဒီအပတ်အတွင်း တရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးခြင်းမျိုး လုပ်လို့သင့်တော်ပါတယ်။အလုပ်သစ်စဖို့အတွက် ရှယ်ယာဝင် တွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမျိုးက ဒီအချိန်တွေမှာအလွန်ပဲကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ဒီကာလဟာ အညံ့အဆိုးနည်းပါ တယ်။ ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့လဲ ကြုံရတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားဆိုအလုပ်တွေများပြီး ချစ်သူဒိတ်ဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးအလွန် ကောင်းပါတယ်။ အကျိုးပေးဂဏန်း 1/5/4 / အထူးဟော အလုပ်များချဲ့ထွင်နိုင်မည်။ …ယတြာ …….လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးဦးကို ကော်ဖီဝယ်တိုက်လိုက်ပါ။ […]
စနေသားသမီးများအတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်း၊သြဇာအာဏာထက်မြက်ခြင်း၊ အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ခြင်း ၊ မင်းစိုးရာဇာကူညီမစခြင်း၊ပက်သက်ရခြင်း ၊ အလုပ်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ရန်အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်များပေါများပြီး ….. ၄င်းတို့အပေါ် ကံအသာစီး အနိုင်ရရှိခြင်း၊ အခြွေအရံပေါများခြင်း ၊ မိမိကိုကြည်ညိုလေးစားချစ်ခင်သူများပေါများခြင်း၊အပျို၊လူပျိုများ လူလိမ်ခံရတတ်ခြင်း ၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများလက်ဆောင်ရခြင်း တို့ ကြုံရလတ္တံ့။ လုပ်ငန်းသစ်များစတင်သင့် ။ စီးပွား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးချဲ့သင့်။ လုပ်ငန်းစီးပွား လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွားမြင့်တက်လတ္တံ့။ ကံကောင်းအံ့။ ငွေရေးကြေးရေး – မထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ်လာအံ့ ။ လွဲချော်ပြီးမှ အောင်မြင်အံ့ ။ ရမလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးများ ကြန့်ကြာနေပြီး ၊ မရဘူးဟုထင်ရသောငွေကြေးများ ပြန်လည်ရရှိအံ့ ။ ကောင်းမလိုလိုနှင့်ညံ့ပြီး ညံ့မလိုလိုနှင့်ကောင်းအံ့။ ၀င်သလောက် ပြန်ထွက်နေအံ့ ။ အလှူအတန်းများလုပ်ရအံ့ ။ငွေရေးကြေးရေး အထူးယတြာ – စီးနေသောရေထဲတွင် […]
ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့််တက်လတ္တံ့။ အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း ၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင်ရှိလတ္တံ့။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများ စုဆောင်းတိုးပွားခြင်းတို့ကြုံရလတ္တံ့။ စိတ်ကူးဥာဏ်ပေါ်သလောက် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ အချိန်မဖြုန်းသင့်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိသမျှ ရဲရဲလုပ်ပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အတိုက်အခံ အခက်အခဲ စိတ်ပူစရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာများကြုံတွေ့ပြီးမှ အောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတ်ကံ အကောင်းအဆိုး နှစ်မျိုးစလုံး၏ အကျိုးကို တွေ့ကြုံခံစားရလတ္တံ့။ ငွေရေးကြေးရေး – အတိတ်ကံကို အကြောင်းပြု၍ ငွေကြေးအစုလိုက်အပုံလိုက်ရအံ့။ ငွေကြေးကံ အထူးကောင်းနေအံ့။ ငွေကြေးကိစ္စများ မိမိရည်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုအောင်မြင်အံ့။ မိမိရည်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုစုဆောင်းရအံ့။ တိုးပွားအံ့။ မလိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ငွေကြေးဖြုန်းတီးမိတတ်တာကိုတော့ သိထားသင့်။ ငွေကြေးကိစ္စများ ရဲရဲတင်းတင်း […]
မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၈၁)ခုနှစ်အတွက်(၁) နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကြီး တနင်္ဂနွေသားသမီးများ သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံးနှင့် ကံတရား၏ မျက်နှာသာပေးခြင်းကို ခံရခြင်း ၊ စိတ်ချမ်းသာလို့ ကိုယ်ကျန်းမာခြင်း ၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်များဖြင့်အောင်မြင်ခြင်း ၊ မိတ်ဆွေရင်း လူရင်းများက သစ္စာဖောက်ခြင်း ၊ အောက်လက်ငယ်သား ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခြင်း ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့၏ ကူညီမစခံရခြင်း ၊ လူအများ ပရိတ်သတ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရသောအလုပ်များတွင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အောင်မြင်ခြင်း ၊ စုတ်ရော လာဘ်ရောပွင့်နေခြင်း ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စများအောင်မြင်ခြင်း ၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ထင်ပေါ်ကျောဇောခြင်း ၊ အကောင်းပြောချီးမွမ်းခံရခြင်း ၊ တို့ မုချကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။ ကံဇာတာပွင့်လန်းတိုးတက်အံ့။ လုပ်သမျှ ကြံသမျှ အောင်မြင်ထမြောက်လတ္တံ့။ အကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များကို မြန်ြမန်ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်အံ့။စီးပွားလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့်အားနှင့်တိုးချဲ့သင့်အံ့။အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများကို ဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းရှိအံ့။ ပြဿနာများကို […]